हतारमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति दिनुअघि गम्भीरतापूर्वक सोचौँ : डब्ल्यूएचओ
काठमाण्डौ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति दिनुअघि गम्भीरतापूर्वक सोच्न चेतावनी दिएको छ। डब्ल्यूएचओका मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथनले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सबै देशमा ट्रायल पूरा गर्नुअघि नै औषधि वा भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति दिने अधिकार हुने भए पनि अहिलेको यो...
कोरोना भ्याक्सिन : त्यो लडाइँ जसमा सबै जायज छ
काठमाण्डौ । गत अगस्ट १ मा रुसको राजधानी मस्कोमा कोरोनाविरुद्धको पहिलो भ्याक्सिनलाई अनुमति दिइयो र यसको नाम ‘स्पुतनिक ५’ नाम दिइएको। यो कुरा सारा विश्वमा भुसमा आगो लागेझैँ फैलियो। सन् १९५७ मा सोभियत युनियनले स्पुतनिक स्याटेलाइट लन्च गरेको थियो। जसले स्पेसको दौडमा बाँकी सबैलाई पराजित गरेको थियो। यसैको सम्झनामा रुसले कोरोनाविरुद्ध...
काठमाण्डौ । उद्योगपति विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उद्योगपति चौधरीले शुक्रबार १२ः५७ मा ट्विटरमार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका हुन्। उनले आज बिहान गरेको पीसीआर परीक्षणका क्रममा आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराएका छन्। चौधरीले आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि लक्षण भने...
बालबालिकामा कोरोनाको गम्भीर संक्रमण देखिनु ‘दुर्लभ’, मृत्यु झनै ‘अति दुर्लभ’
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसबाट बालबालिकामा हुने गम्भीर संक्रमण ‘दुर्लभ’ र यसबाट ज्यानै जानु झनै ‘अति दुर्लभ’ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतमा बिहीबार प्रकाशित एउटा शोध प्रतिवेदनअनुसार बालबालिकामा कोरोनाको असर विषयमा भने अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको हो। यो शोध बेलायतका अस्पतालहरुमा भर्ना गरिएका कोरोना संक्रमित बा�...
मोटोपन भएका संक्रमितमा कोरोना भ्याक्सिन असरदार नहुन सक्छ : अध्ययन
काठमाण्डौ । अहिले विश्वका विभिन्न देशमा डेढ सयभन्दा बढी कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन विकासमा काम भइरहेका छन्। रुसले त एउटा भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याउन उत्पादन नै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ भने अर्को एउटा भ्याक्सिन पनि प्रयोग ल्याउन अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ। चीन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य देशमा कोरोना भ्याक्सिनमाथि...
अब १२ मिनेटमै कोरोना संक्रमणको नतिजा आउने
काठमाण्डौ । स्कटल्यान्ड लुमिराडीएक्स नामक एउटा कम्पनीले अब १२ मिनेटमै कोरोना संक्रमणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य उपकरण बनाउने कम्पनी लुमिराडीएक्ससँग यस विषयमा स्कटल्यान्ड स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता पनि गरिसकेको छ। सम्झौताबमोजिम अब यो कम्पनीले आफ्नो कारखानामा खास टेस्टिङ स्ट्रिप बनाउनेछ। यो स्ट्रिपको मद्दतले...
रुस धमाधम कोरोना भ्याक्सिन बनाउँदै, अर्को पनि प्रयोगमा ल्याउने तयारी
काठमाण्डौ । कोरोनाविरुद्धको स्पुत्निक–५ नामक भ्याक्सिन लन्च गरिसकेको रुसले फेरि अर्को भ्याक्सिनलाई प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार बुधबार देशका उपप्रधानमन्त्री तात्याना गोलिकोवाले आउँदो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म वा अक्टोबरको सुरुआतमै उक्त भ्याक्सिन प्रयोगका लागि अनुमति दिइने...
कोरोना कहर : विश्वभर लाखौँ कम्पनीहरु टाँट पल्टिँदै, भयंकर मन्दीको संकेत
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीले सम्पूर्ण विश्वलाई नै हल्लाइदिएको छ। यो महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पारिदिएको छ। विश्वभरका सरकारले आफ्ना प्रणालीमा करिब १८ लाख करोड डलर खन्याउँदा पनि कम्पनीहरु टाँट पल्टिरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण जर्मनीका करिब ५ लाख कम्पनीहरु टाँट पल्टिसकेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र...
पहिलोपटक निको भइसकेका एक युवकमा पुनः कोरोना पुष्टि, कति खतरनाक ?
काठमाण्डौ । संक्रमणमुक्त भइसकेका हङकङका एक युवकमा पुनः कोरोना पुष्टि भएको छ। करिब ३० वर्षीय युवकमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण भएर निको भएको झन्डै साढे ४ महिनापछि फेरि दोहोरिएर संक्रमण भएको वैज्ञानिकले बताएका छन्। पहिले संक्रमण भएको भाइरस र अहिलेको भाइरसबीच स्पष्ट रुपमा जिनोममा भिन्नता रहेको वैज्ञानिकहरु दाबी गर्छन्। त्यसो त एकै...
चीनमा ट्रायल पूरा नहुँदै कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सुरु
काठमाण्डौ । चीनमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ट्रायल पूरा नहुँदै मानिसमा लगाउन सुरु गरिएको खुलासा भएको छ। चीनका एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार चीन सरकारले केही क्षेत्र छनोट गरी त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुलाई गत जुलाईबाटै भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेको हो। यद्यपि उक्त भ्याक्सिनको ट्रायल पूरा नभएका कारण आधिकारिकता प्राप्त गर्न सकेको...
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको मानव परीक्षणमा ढिलाइ गरेको भन्दै ट्रम्प आक्रोशित
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्थानीय समय अनुसार शनिबार कोरोनाभाइरस खोपको मानव परीक्षणलाइ सुस्त बनाउन खोजेका भन्दै अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन ९एफडीए० को आलोचना गरेका छन्। एफडिए वा यसका अधिकारीले औषधी कम्पनीहरूले खोप र उपचारको मानव परीक्षण प्रक्रियालार्ई धेरै जटिल बनाइरहेका छन्,” ट्रम्पले ट्वीट गर्दै...
कोरोना संक्रमणबाट हरेक १५ सेकेन्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु
काठमाण्डौ । विश्वमा हरेक १५ सेकेन्डमा कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। रोयटर्सका अनुसार हरेक २४ घन्टामा कोरोनाबाट औसत ५ हजार ९०० जनाको ज्यान जाने गरेको छ । यो तथ्यांक पछिल्लो दुई साताको आँकडामा आधारित छ । यो हिसाबले विश्वमा हरेक घन्टा २४६ जना र प्रत्येक १५ सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक...
कोरोना कहर : कति–कति उमेरका बालबालिकाले मास्क लगाउने/नलगाउने ?
काठमाण्डौ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना महामारीबीच १२ वर्षभन्दा बढी उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाउनेसम्बन्धी नयाँ नियम जारी गरेको छ। डब्ल्यूएचओले जुन–जुन देशमा वयस्कहरुका लागि मास्क लगाउनेसम्बन्धमा जुन–जुन नियम लागू गरिएको छ, तिनै नियमहरु १२ वर्षभन्दा बढी उमेरका बालबालिकामा पनि लागू गर्न भनेको छ। शीर्ष...
युरोपेली मुलुकहरुमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो, कारण यस्ता छन्
काठमाण्डौ । केही समययता युरोपेली मुलुकहरु फेरि कोरोना संक्रमणको मामिला बढ्न थालेको देखिएको छ। फ्रान्समा हिजो बिहीबार एकै दिन ४ हजार ७७१ नयाँ संक्रमणको मामिला देखियो। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा १ हजारले बढी पनि हो। मे महिनापछि पहिलोपटक फ्रान्समा कोरोना संक्रमणको मामिला ४ हजारभन्दा बढी अधिक देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरु ब�...
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको मामिला घट्दै
काठमाण्डौ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको मामिला घट्न थालेको देखिएको छ। जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको आँकडाअनुसार बितेको एक सातामा अमेरिकामा ४७ हजार ३०० नयाँ मामिला देखिएका छन्। जब कि जुलाई २२ सम्म साप्ताहिक रुपमा संक्रमणको मामिला औसत रुपमा ६७ हजार ३१७ देखिँदै आएको थियो। गत जुलाई १७ मा मात्रै एकैदिन अमेरिकामा रेकर्डतोड ७५ हजार नयाँ...